shacab lagu dilay degmada Balanbale iyo xiisad dagaal oo halkaa ka taagan - Muqdisho Online
Home News shacab lagu dilay degmada Balanbale iyo xiisad dagaal oo halkaa ka taagan
shacab lagu dilay degmada Balanbale iyo xiisad dagaal oo halkaa ka taagan
Wararkaaynu ka heleyso degmada Balanballe ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in Maanta halkaasi lagu dilay laba Ruux oo la sheegay inay ahaayeen Xoolo Dhaqato.
Maleeshiyaad hubeysan ayaa duleedka Degmada Balanbale waxa ay ku dileen laba ruux oo ka mid ahaa dadka deegaanka,waxaana la sheegay in dilka kadib maleeshiyaadka ay goobta isaga baxsadeen,sida ay sheegeen dad ku sugan degmada Balanballe.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in dilkaan uu la xiriiro aanooyin qabiil,isla markaana uu daba socdo dil shalay ka dhacay degmada Guriceel ee Gobalka Galgaduud, iyada oo weli aan lagu guuleysan in la qabto maleeshiyaadkii ka dambeeyay dilkii ka dhacay Guriceel.
Sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee nasoo gaaraya ayaa waxaa ay sheegayaan in xiisad colaadeed ay maanta ka taagan tahay duleedka degmada Balanbale, islamarkaana haatan meydka labada qof ee la dilay.
Maamulka degmada Balanballe iyo saraakiisha Ciidamada Dowladda iyo kuwa Galmudug weli kama hadlin dilkii ka dhacay degmada Balanballe marka lag reebo in dilkii shalay ka dhacay Guriceel ay ciidamada xoogga dalka sheegeen inay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyay.
Previous articlekulan looga arinsanayay dagaalka kadhanka ah Al-Shabaab oo dhex maray saraakiisho ciidanka Xooga& AMISOM
Next articleKalluumeysato lagu la’yahay Xeebaha Maamulka Puntland
Yaa u Sharraxan Madaxweynenimada Somaliya doorashada la rajeynayo in dhacdo 20/21.
Soomaaliya oo kula heshiiyay Turkiga in shidaal ka soo saaraan Soomaaliya
Al Shabaab oo soo bandhigay hub laga qabsaday dowlada
Wararka Axmed Geelle - February 23, 2020
Muqdisho Online waxaa sadaalineysaa in doorashada soo socotaa, waa haddiiba NN ay aqabtaan dorashee, in ay noqon doonto mid ay dad badani isu soo...
Wararka Safia Ali Yasin - February 23, 2020
Iyada oo horay heshiisyo kala duwan lala galay shirkado ka baara shidaal dalka Soomaaliya, gaar ahana badda Soomaaliya, ayaa hadana waxa ay dowlada Fedraalka...
Al-shabaab ayaa soo bandhigtay gaadiid iyo hub badan oo ay sheegeen inay Ciidanka dowladda Federaalka uga qabsadeen dagaalkii ka dhacay deegaanka Ceel-saliini ee duleedka...
Wasiir Islow oo loo adeegsanayo hagar daamada beesha Mudulood
Mareykanka oo soo bandhigay sawirro muujinaya meesha uu ka yimid weerarkii...
Sharmarke Xuseen - September 16, 2019
War Deg Deg ah:-Ardayad Lagu Dhex-dilay Jaamacadda Soomaaliya
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - September 21, 2018